Doorashada Somalia: Dabaal-deagga Farmaajo iyo Dareenka Shacabka | Berberanews.com
Home WARARKA Doorashada Somalia: Dabaal-deagga Farmaajo iyo Dareenka Shacabka
Doorashada Somalia: Dabaal-deagga Farmaajo iyo Dareenka Shacabka
Muqdisho(Berberanews):- Dhawaaqa Rasaas is-daba-joog ah oo isugu jirta hubka noociisa waawayn iyo kiisa yaryar, ayaa laga maqlayaa Xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo loogu dabbaal-degayo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya caawa yeelatay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ku guulaystay doorashada ka socotay Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo oo Xilka loo dhaariyey, Dabbaal-deg Muqdisho ka bilaabmay iyo Xasan Sheekh oo Hambalyeeyey 2017
Waxaa wareegga labaad ee doorashada oo ay kula tartamayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, waxaana uu ku guulaystay inta badan codadka la dhiibtay wareegga labaad. Waxaana hambalyeeyey Madaxweynaha xilka hayey ee la tartamayey Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynihii ka sii horreeyey Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isaguna la tartamayey.
Xasan Sheekh oo wareegga saddexaad ee doorashada ay isla gaadhi lahaayeen, ayaa markuu arkay siday Codadkoodu u kala badan yihiin shaaciyey inuu tanaasulay, waxaanay Guddiga doorashadu ku dhawaaqeen in Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya sidaa ku noqday Farmaajo oo isla markiiba la dhaariyey.
Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa durba loo dhaariyey Xilka Madaxweynaha Soomaaliya. Waxa uu markii la dhaariyey ka dib Hambalyo u diray Xubnaha la tartamay, Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka ee doortay, Guddiga hawsha wadday iyo caalamka taageeray.
Waxa uu Madaxweyne Farmaajo ballan-qaaday inuu caddaalad, sinnaan iyo maamul-wanaag ku hoggaamin doona afarta sano ee la doortay, waxa uu u mahad-celiyey Madaxweynaha tartanka kula jiray ee xilkiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaanu Farmaajo sheegay inay Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalku muujiyeen rabitaankii Shacabka Soomaaliyeed.
Saraakiil Ciidan u sheegeen Aftahannews, in Rasaastaas durba ay Ciidammada qalabka sidaa ugu dabbaal-degayaan Maxamed Cabdillaahi Maxamed (Farmaajo) oo ku horreeya Codadka wareegga labaad ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo hadda loo gudbay Wareegga labaad.
Shacab ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inay ka argaggexeen Rasaasta badan ee ay dhawaaqeeda ka maqlayaan magaalada qaybo ka mid ah, gaar ahaan dhinaca nawaaxiga Madaxtooyada iyo goobo kale oo isla Muqdisho ah. Hase-yeeshee, Saraakiil Ciidammada Booliska iyo Millateriga Soomaaliya ka tirsan oo Muqdisho ku sugan oo Weriye Aftahannews.com ka tirsani wax ka weydiiyey Rasaasta dhacaysa iyo sababta ay u dhacayso, ayaa sheegay inay tahay dabbaal-deg ay ku taageerayaan Ciidammadu Farmaajo.
Rasaas badan ayaa natiijada ka doorashada ka hor iyada oo ay tirinta codadku socdaan Ciidammada Qalabka sida ee Soomaaliya ka bilaabeen magaalada Muqdisho, sida ay Saraakiil Ciidan u sheegeen Aftahannews, in Rasaastaas durba ay Ciidammada qalabka sidaa ugu dabbaal-degayaan Maxamed Cabdillaahi Maxamed (Farmaajo) oo ku horreeya Codadka wareegga labaad ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo hadda loo gudbay Wareegga labaad.
Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa Codadka Xildhibaannada Baarlamaanka ee labada dhiibteen wareegga labaad ee doorashada oo ay isugu soo hadheen saddex Musharrax oo kala ah Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxa uu Farmaajo helay 184, halka uu Xasan Sheekh ka helay 97 iyo Shariif Sheekh oo helay 46 Cod.
Waxaana markii uu Xasan Sheekh oo wareegga saddexaad ay u wada gudbi lahaayeen marka uu arkay codadka lagaga horreeyo sheegay inuu ka tanaasulay wareegga saddexaad oo guusha uu gaadhay ku hambalyeynayo Madaxweyna cusub ee Soomaaliya Mudane Farmaajo, ka bilaabmay inta badan magaalooyinka dalka Soomaaliya dabbaal-degyo ay Shacabka iyo Ciidammada Soomaaliya ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin doorashada Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo oo ah Nin ay si weyn u taageeraan Shacabka iyo Ciidammada Qalabka sida ee Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan jecelahay inaan halkan uga hambalyeeyo Walaalkay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo noqonaya Madaxweynaha Soomaaliya. Waxaanan Shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in lala shaqeeyo Madaxweynaha cusub, waxaanan u rejaynayaa in Illaahay xilka ku asturo.” Sidaa waxa yidhi Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Previous articleIngiriiska oo heshiis is-dhaafsiga Maxaabiista ah la galay Somaliland
Next article“Maxamuud Xaashi iyo Moorgan baa ina Xukuma, dad liita baynu nahay.” Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble